यस्तो गाउँ जहाँ पाहुनाले पनि नांगै बस्नुपर्छ - Nepali Online News Media-shikharnews.com
यस्तो गाउँ जहाँ पाहुनाले पनि नांगै बस्नुपर्छ
२०७६ असार ३ मंगलवार
विश्वमा देश अनुसारका संस्कार, परम्परा तथा रहनसहन विद्यमान छन् । धेरैका लागि उनीहरुको पहिरन तथा पोषाक नै पहिचान बन्ने गरेको छ । तर यही दुनियाँमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँका मानिसले कपडा नै लगाउँदैनन् । उक्त गाउँका मानिस पूर्णरुपमा निर्वस्त्र रहन्छन्, त्यो पनि अत्याधुनिक जीवनशैली र ठाँटबाँटका साथ । आखिर किन यस गाउँमा मानिसहरु नांगै बस्छन् त ? बेलायतको हर्ठफोर्डशायरस्थित ब्रिकेटवुडमा एउटा सानो गाउँ छ । गाउँका नाम हो स्पीलप्लाट्ज । उक्त गाउँमा पछिल्लो ८५ वर्षदेखि मानिसहरु निर्वस्त्र बस्दै आएका छन् । चाहे महिला हुन् वा पुरुष । केटाकेटी हुन् वा बुढाबुढी वा तन्नेरी सबै नांगै बस्दछन् ।
खासमा यो गाउँमा रहेका घरहरु भाडामा लिएर बस्नका लागि पर्यटकहरु समेत यहाँ आउँदछन् । यहाँ आउने पर्यटकहरुले समेत गाउँमा रहून्जेल नांगै बस्नुपर्दछ र गाउँका अन्य नियम पनि पालना गर्नुपर्दछ । गाउँलेहरुको आफ्नै पव, स्मिमिङ पुल, बंगला तथा खानपिनको व्यवस्था छ ।
सन् १९२९ मा इसुल्ट रिचर्डसन नामक व्यक्तिले यो गाउँ पत्ता लगाएका थिए । यहाँ मानिसहरु पूर्णरुपमा प्रकृतिमा समाहित भएर बाँच्दछन् । मानिसहरुलाई ठण्डी याममा कपडा लगाउने स्वतन्त्रता चाहीँ दिइएको हुन्छ ।
सुहागरातको भोलिपल्ट तन्ना किन फेरिन्छ?
बीबीसी। ‘विवाहपछि जब उनले मेरो अगाडि कपडा खोल्न थाले तब म एकदमै डराएकी थिएँ।’ एलमीरा (नाम परिवर्तन) ले भनिन् । उनले अगाडि भनिन्– मैले आफूलाई धेरै सम्झाउने कोशिश गरेँ। विवाहपछि यो सबै हुन्छ नै। तै पनि मेरो मनले शान्ति पाएन। त्यो बेला मेरो दिमागमा के आयो भने अब मैले पनि आफ्नो कपडा उतार्नुपर्छ ।’ एलमीरा २७ वर्षकी भइन् र उनले भर्खरै मात्र विश्वविद्यालयबाट आफ्नो शिक्षा पूरा गरिन्। अहिले उनी दोभाषेका रुपमा काम गर्छिन्। उनी आमा आफ्नाी छोरीकालागि योग्य पति खोजेकी थिइन्। आमाको खुशीकालागि उनले विवाह गर्ने सहमति पनि दिएकी थिइन् ।
‘उनी हाम्रा छिमेकी थिए, हामी अलग थियौं। उनी धेरै पढालेखा पनि थिएनन्,’ उनले भनिन् । एलमीराले आफ्ना आमासँग धेरै पटक तत्काल विवाह नगर्ने बताएकी थिइन्। छोरीको कुरा आमाले आफ्ना नातोदारलाई बताइन्। नातोदारले एलमीराको कुमारीतवमाथि शंका गर्दै तत्काल विवाह गर्न दवाब दिन थाले। विवाहपछि एलमीराले पहिलो पटक यौन सम्पर्क पनि गरिन् ।
विवाहको पहिलो रात पतिले एलमीरामाथि आफूलाई समर्पित गरे। त्यो क्रममा एलमीराले बेडरुम बाहिर केही आवाज सुनिन्। जुन आवाज उनकी आमा, सासु र एकजना नातेदारको थियो । अजरबैजानमा विवाहको रात बेहुलीको कुमारीत्व (भर्जि्निटी) पत्ता लगाउने पुरानो परम्परा छ ।
एक विवाहित महिला नातेदार (एंजी) को भूमिका निर्वाह गर्छिन्। उनी विवाहपछि बेहुलीसँग जान्छिन् र रातभर बेडरुम बाहिर बस्छिन् । एलमीरा भन्छिन्–तपाइँ विस्तारै बोलेको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। म पीडा र लाजले कामीरहेकी थिएँ। र, आफैंसँग प्रश्न गरिरहेकी थिएँ के यसैलाई विवाह भनिन्छ?’
‘एंजी’ को भूमिका भनेको अनुवहीन बेहुलीलाई मानसिक रुपमा तयार गर्नु हुन्छ। त्यसपछि एंजीले विवाहको रात सकिएपछि ओछ्यानको तन्ना हटाउने हो । तन्नामा रगतको टाटो देखिएपछि विवाहको प्रक्रिया समाप्त हुन्छ । त्यसपछि मात्रै मासिनले नवविवाहित जोडीलाई बधाइ दिन्छन् ।
अजरबैजानमा महिला अधिकारको अध्ययन गरेकी शाखला इस्माइलका अनुसार त्यही कारण विवाहको राति सधैै रहस्यमय हुन्छ कि विहान तन्नाबाट के थाहा हुन्छ ? यदि तन्नामा रगतको टाटो देखिएन भने बेहुलीले समाजिक बहिष्कारसम्म खेप्नुपर्छ। र, बेहुलीलाई माइतीमै फर्काउनेसम्मको चलन हुन्छ। त्यसपछि बेहुलीलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेको रुपमा बुझिन्छ। र फेरि विवाह गर्न समस्या हुन्छ ।
अजरबैजानमा काम गर्ने मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताका अनुसार देशको ग्रामीण इलाकामा यो चलन अहिले पनि जारी छ। कहिले काँही विवाह भन्दा पहिला बेहुलीको कुमारीत्वको जाँच केही विशेषज्ञ महिलाले गर्ने गर्छन्। यो परम्पराप्रति केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले विरोध पनि जनाएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो प्रथालाई खारेज गर्न अपील गरेका थिए ।
उनीहरुका अनुसार यो प्रथा महिलाकालागि अपमानजनक हो। यो प्रथा अहिले पनि विभिन्न २० मुलुकमा प्रचलित छ । डब्ल्यूएचओले आफ्नो वक्तव्यमा मेडिकल साइन्समा कुमारीत्वको कुनै स्थान हुँदैन। यो केवल सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक मान्यतामात्रै भएको उल्लेख गरेको थियो । एलमीरा भन्छिन्–म निकै डराएकी थिएँ र पूरै रात सुत्न सकिन। यो कुराले उनलाई केही पनि प्रभाव परेन। उनी आरामसँग निदाए।’
‘विहान ती मानिस बेडरुममा तन्ना लिन आए। त्यो बेला मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन्। किनभने यो किनै घृणित काम थियो। तर अघिल्लो रातको डरमाथि मेरो लाज हावी भएको थियो ।’